यौन जिज्ञासा - यौनकर्मीको संगत छाड्न सकिएन .. लौन के गरूँ ?
Topic: यौन जिज्ञासा - यौनकर्मीको संगत छाड्न सकिएन .. लौन के गरूँ ?
Author Topic: यौन जिज्ञासा - यौनकर्मीको संगत छाड्न सकिएन .. लौन के गरूँ ? (Read 1867 times)
« on: February 27, 2018, 01:51:00 AM »
म २३ वर्षीय स्नातक तहको विद्यार्थी हुँ । अहिले म ब्याइज होस्टलमा बसेर अध्ययनरत छु । गाउँबाट मेरा लागि आमा-बुबाले सकी-नसकी खर्च पठाउनुहुन्छ । म भने यौन आवेगमा यौनकर्मीकहाँ जान्छु र धेरैजसो पैसा त्यसैमा खर्च गर्छु । बेरोजगार भएकाले विवाह गर्न सक्दिनँ । एउटी केटीलाई मन पराउँथें, तर उनीसँग यौनप्रस्ताव राख्न सकिनँ । यसले मेरो चिन्ता बढाएको छ । म गलत बाटोमा लागिरहेको छु भनेर आफैंलाई धिक्कार्छु । मेरो पढाइ पनि बिग्रन थालेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यौनकर्मीको संगत छाड्न सकेको छैन । यो कस्तो खालको रोग हो र मैले के गर्नुपर्छ ?
तपाइले यौनकर्मीकहाँ जानु एकातिर समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ भने अर्कातिर जान छोड्न सकेको छैन पनि भनिरहनुभएको छ, जसअनुसार तपाईं उल्झनमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । अब चर्चा गरौं, यो विषयलाई लिएर गरिएका केही अध्ययनको ।
अमेरिकामा १५ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनअनुसार पुरुषहरू जो यौनकर्मीकहाँ जान्छन् उनीहरूलेे पैसा तिरेपछि क्षणिक भए पनि यौनकर्मीले पूर्ण रूपमा माया गरेको, हेरविचार गरेको र आफूप्रति समर्पित भएको महसुस गर्छन् । उनीहरूले यौनकर्मीसँगको सम्पर्कमा कुनै जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने, आत्मीयताका कारण पुग्ने चोटको सामना गर्नु नपर्ने, उसलाई खुसी दिने कुरा सोच्नु नपर्ने जस्ता तथ्य उल्लेख गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी पुरुषहरूले विशेष गरेर आफू आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा भएको महसुस गर्ने कुरा पनि बताएका छन् ।
तपाईंले यौनकर्मीकहाँ जाने लत नै लागिसकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । लत नै पछि कुलतमा परिणत हुन्छ । त्यसले तपाइर्ंको दैनिक जीवनमा हानि-नोक्सानी नपुर्‍याएसम्म त्यति नराम्रो गर्दैन, तर दैनिक कामकाज वा सिर्जनशीलतामै हानि-नोक्सानी पुर्‍याउन थाल्यो भने त्यसलाई नराम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै मान्छेले दिनहुँ लामो समयसम्म यस्तो कुरा सोचिरहने हो भने उसको मनोभावनामा असर पर्न थाल्न सक्छ । किनभने लामो समयसम्म यस्तो गतिविधिमा लागिरहँदा त्यसको सीधा असर उसका अन्य गतिविधिहरूमा पर्न थालिसकेको हुन्छ, अन्य सम्बन्ध टुट्न थालिसकेको हुन्छ । कार्यालयमा काम गर्ने हो भने समयमा काम पूरा गर्न नसक्ने तथा सिर्जनशील हुन नसक्ने समस्या उत्पन्न भैसकेको हुन्छ । कामको दबाब महसुस हुन थालिसकेको हुन्छ । त्यसबाट गाली खान वा आलोचना खेप्न थालिसकेको हुन्छ । दैनिक उठबस, हिँडडुल, शारिरीक अभ्यास आदि गतिविधिमा असन्तुलन आइसकेको हुन्छ । मान्छेले थाहा नपाइर्ं त्यसलाई कुलत बनाइसकेको हुन्छ । त्यसका अनेकन मनोवैज्ञानिक असर हुन्छन् । केही विज्ञले त आफ्नो सम्बन्धभन्दा बाहिरका कुनै पनि प्रकारका यौनजन्य गतिविधिलाई नै गलत भन्ने गरेका छन् । घरमा आफ्नी यौनसाथी छँदाछँदै यौनकर्मीप्रति निर्भर हुन थाले त्यसले सम्बन्धमा समस्या पैदा गर्ने कुरा त छँदैछ । धेरै यौनकर्मीसँगको सम्पर्कले शारीरिक तथा सामाजिक जीवनमा समेत असर पर्न सक्छ । यसबाट यौनरोगहरूको संक्रमणको प्रबल सम्भावना हुन्छ र पछि पश्चातापको भावना उत्पन्न हुन सक्छ । बाहिरबाट अरूले सम्बन्धित व्यक्तिको मानसिकता बुझ्न नसक्दा आक्षेपको सामना गर्नुपर्ने तथा कानुनी झन्झटमा पर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
त्यसैले सेक्सबाहेकका मनोरञ्जनका माध्यममा समय बिताउने वा अन्य मनोरञ्जक गतिविधिमा सहभागी हुने बानी बसाले यौनकर्मीकहाँ जाने बानीमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । स्थायी रूपमा यौनसाथीको संगतमा पुग्दा पनि यस्ता बानीमा कटौती हुन्छ ।
साभार : साप्ताहिक
Re: यौन जिज्ञासा - यौनकर्मीको संगत छाड्न सकिएन .. लौन के गरूँ ?
« Reply #1 on: February 27, 2018, 01:52:58 AM »
देहव्यापारलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
गैरकानुनी रूपमा लुकिछिपी चलाइने देहव्यापार नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यसलाई कानुनी मान्यता नदिनुको विकल्प छैन ।
- सागर क्षेत्री
यो काम अहिले विकृतिका रूपमा विद्यमान छ, बरु निश्चित ठाउँ छुट्याएर कानुनी मान्यता दिनु नै बेस होला ।
- सन्दर्भ सप्तरिया
कानुनी मान्यता दिने हो भने निश्चित क्षेत्र तोकिनुपर्छ, नियममा बाँध्न सक्नुपर्छ, होइन भने बारीमा छाडिएको गोरुको हालत हुन्छ ।
यो चिया-कफीको व्यापार हो र मान्यता दिनलाई ?
हुन्छ, कसैले आफ्नो निजी शरीरको माध्यमले कसैको करकापबिना व्यवसाय गर्छ भने रोक लगाउनु उचित पनि हुँदैन ।
- पागल बस्ती
मुठी बन्द गर्दा मान्छेलाई कौतूहलता हुन्छ, मुठीभित्र के छ भनेर, तर मुठी खुला हुँदा त्यसमा कसैले चासो राख्दैन । देहव्यापार पनि यस्तै हो । लुकीछिपी हुँदा यसले अझ ठूलो विकृति निम्त्याइरहेको छ । त्यसैले निश्चित स्थान र समय छुट्टयाएर कानुनी मान्यता दिँदा राम्रै हुन्छ कि ?
- रोदन शर्मा लामिछाने
न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेर देहव्यापारलाई कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ । साँच्चै सरकार विवेकशिल छ भने यसबाट सरकारको आम्दानी बढ्नेछ भने अर्कातर्फ बलात्कारका घटना कम हुनेछन् ।
- कुसा पुन
देहव्यापारलाई कानुनी मान्यता दिए कुनै फरक नपर्ला भन्छु म ।
- गोविन्द कुरुम्बाङ
पैसा कमाउन शरीर नै बेच्नुपर्छ र ? सीप र शिक्षा भए महिलाहरूलाई स्वदेशमै जति पनि अवसर छ । देहव्यापारलाई मान्यता दिनु भनेको आफ्ना चेलीबेटीलाई गलत बाटोमा लगाउनु हो । देहव्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने भन्दा पनि यो बाटोतर्फ कोही पनि नजाऊन् भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
छुट्टै कानुन बनाएर वैधानिकता दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । किनभने सरकारले यसलाई निर्मूलै पार्न पनि त सक्दैन ।
- निर्मल विष्णु
देहव्यापारलाई प्रश्रय दिए देशको समुन्नत सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितिमा खलल पुग्नेे हुँदा यसलाई कानुनी मान्यता दिनु उचित हुँदैन ।
सवाल सही छ, यति हो कि वेश्यालय सञ्चालन गर्दा आउन सक्ने समस्याहरूको समाधान पनि आफूसँग हुनुपर्छ ।
- प्रतीक उदास
कुनै पनि चिजलाई जति कस्न खोज्यो उति नै फुत्किन खोज्छ । कुरा बुझियो होला, कुरा सफा छ । अर्को कुरा अहिले जति पनि यौन हिंसा भैरहेको छ त्यसमा पनि कमी आउने थियो ।
- सुनिल आचार्य
दिनुपर्छ, देहव्यापारलाई कानुनमै परिभाषित गरेर व्यवस्थित गर्न सकियो भने अहिले यो विषयमा जे-जस्ता चर्चा-परिचर्चा हुन्छन् त्यसमा कमी आउने थियो ।
दिनुहुँदैन, कुनै पनि मानिसले आफ्नो शरीर बेचेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि राज्य र समाज दुवै सक्रिय हुनुपर्छ ।
- अरविन्द सिंह
माई बडी माइ राइट्स भन्ने प्रचलित नारा सुन्नुभएको छैन ? मानिसले आफ्नो शरीरलाई जसरी उपयोग गर्न चाहन्छ त्यसमा अरुले किन टाउको दुखाउने ?
- मनिष शर्मा
« Reply #2 on: February 28, 2018, 12:13:14 AM »
श्रीमान् यौनसम्पर्क गर्दा साडी लगाउनु हुन्छ
मेरा श्रीमान् यौनसम्पर्क गर्दा सधैं मेरो साडी लगाउनु हुन्छ। सुरु-सुरुमा मलाई निकै अनौठो लाग्थ्यो र झगडा हुन्थ्यो। जब म प्रश्न गर्थें तब उहाँ रोमान्टिक विचारजस्तो लाग्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो। उहाँको मप्रतिको अन्य व्यवहार सन्तोषजनक छ। त्यसैले हिजोआज झगडा गर्दिनँ तर पनि यस्तो व्यवहार आखिर के हो भन्नेचाहिँ लागिरहन्छ। यो कस्तो समस्या हो ?
यो दुर्लभ समस्या तपाईंको श्रीमान्मा मात्र देखिएको होइन। यस विषयमा विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धान पनि भएका छन्, जसले यकिन तथ्य पत्ता लगाउन नसके पनि लगभग १ करोड पुरुषमा १ लाख पुरुषले क्रस ड्रेसिङ गर्ने पाइएको छ। यस्तो व्यवहारलाई ट्रान्सभेसटिजम वा क्रसड्रेसिङ भनिन्छ। ट्रान्सभेसटिजम भन्नाले विपरीत लिंगको पहिरन लगाएर यौनसन्तुष्टि लिनु हो। म्यागनस हिरस्फिल्डले यो प्रवृत्तिलाई नयाँ शब्द दिएका हुन्। हिजोआज यही शब्दलाई ट्रान्सजेन्डर नामले पनि चिनिन्छ। अचेल यसलाई अटोजिनेफेलिया पनि भनिन्छ। हिरस्फिल्डका अनुसार यो शब्दले तेस्रो लिंगी, फेटिजम व्यवहार एवं विपरीत लिंगीको लुगा लगाउनेहरूलाई चिनाउँछ। विश्वमा लगभग २५ हजार महिलाले ट्रान्सभेसटिजसँग विवाह गरेका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई त्यसको जानकारी हुँदैन र सँगै जीवन बिताइरहेका हुन्छन्।
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार मानिसहरू लुगामा मात्र होइन, अन्य कुरामा पनि आकषिर्त हुन्छ। बि्रटेनमा गरिएको एक अध्ययनमा १ हजार १४ जना ट्रान्सभेसटिजले दिएको तथ्यअनुसार उनीहरूमध्ये एकतिहाइले लगातार महिलाले लगाउने भित्री लुगा मात्र लगाउँदै आएका छन्। आधाभन्दा कमले आफूलाई जस्तो लुगा लगाउन मन लागेको हो त्यसरी नै लगाएर बाहिर जाने गरेका छन्। कतिपयले सोच्छन्— महिलाले पुरुषको लुगा लगाउन सक्छन् तर पुरुषले किन लगाउन सक्दैनन् ? केही पुरुषले उनीहरूका श्रीमतीले हप्ताको १ घण्टाका लागि मात्र भए पनि महिलाको लुगा लगाउन दिने बताएका छन्। ट्रान्सभेसटिजहरू विपरीत पहिरन लगाउन मन पराउने भए पनि विपरीत लिंगीप्रति नै यौन आकषिर्त भएको पाइएको छ।
चर्चित मनोदार्शनिक सिग्मन्ड फ्रायडले यस्तो व्यवहार लामो समयदेखिको डरका कारणले उत्पन्न हुन सक्ने बताएका छन्। पुराना मनोविद्हरूका अनुसार बाल्यावस्थामा कुनै आघात्जन्य घटना भएका कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ। कतिपय मनोविद्ले यस्तो व्यवहारलाई सामान्य भनेका छन्। कुनै पनि वस्तुको प्रयोग अनि उक्त वस्तुलाई हेरेर यौन उत्तेजित हुनु स्वाभाविक भए पनि यदि यस्तो व्यवहारले आफ्नो पार्टनरमाथि दबाब महसुस हुन्छ, हिंसा हुन थाल्छ भने त्यो चाहिँ स्वाभाविक होइन। यदि तपाईंको श्रीमान्को व्यवहारले तपाईंहरूमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ भने यस विषयमा उहाँलाई पनि सम्झाउन आवश्यक हुन्छ। तपाईंको श्रीमान्मा देखिएको व्यवहार समस्या हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँले पनि प्रस्टसँग बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। तपाईंहरूबीच यौनइच्छामा मात्र भिन्नता नरही सामाजिक समस्या सुरु हुनसक्छ र अन्ततोतत्वा आफंैलाई हानी हुन थाल्छ। अहिले यसका लागि विभिन्न किसिमका उपचार पद्धति अपनाउन सकिन्छ। मनोविद्को सहयोगमा साइकोथेरापी, कगनेटिभ विहेभिएर थेरापी आदिले यसमा सहयोग गर्न सक्छ, जसमा विगतमा भएको भावनात्मक समस्यामा भन्दा पनि अहिले देखिएको समस्यामा केन्दि्रत रहेर उपचार गरिन्छ। यसका लागि औषधी-उपचार पनि गराउन सकिन्छ, जसका लागि मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ।
« Reply #3 on: February 28, 2018, 11:06:00 PM »
मेरा यौन सम्बन्धहरु किन सन्तोषजनक हुन सकेनन् ?
म २९ वर्षीय युवक हुँ। अहिलेसम्म तीन जना युवतीसँग यौनसम्पर्क भैसकेको छ। उनीहरूसँग यौनसम्बन्ध लगभग एक-एक वर्षको अन्तरालमा भएको छ। ती तीनै जनासँगको यौनसम्बन्ध भने सन्तोषजनक थिएन। तीनै जनासँग यौनसम्बन्धमा सन्तुष्टि प्राप्त नहुनु म आफैंमा कुनै खराबी
भएर हो कि भनेर चिन्ता लाग्न थालेको छ। अब म नयाँ तर स्थायी सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छु तर पहिले जस्तै यौनसम्बन्ध राम्रो नभएका कारण सम्बन्ध टुट्ने हो कि भनेर डर लाग्न थालेको छ। मेरा सम्बन्ध किन सन्तोषजनक हुन सकेनन्, ममा केही समस्या भएर हो कि ?
रोमान्टिक सम्बन्धले यौनलाई सन्तोषजनक बनाउँछ। कुनै व्यक्तिको सम्बन्ध रोमान्टिक छ र सम्बन्धका लागि समर्पित छ भने यौनसम्बन्ध सन्तुष्टिदायक हुन्छ। यदि सम्बन्धका बारेमा व्यक्ति आफंै दुविधामा छ र यौनलाई क्षणिक रूपमा लिइएको छ भने यौनसम्बन्धमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो। यौनसम्बन्ध क्षणिक छ र सन्तोषजनक छैन भने आफ्नै यौनचाहना र इच्छामा शंका गर्न थालिन्छ, जसका कारण पछि आफूप्रति पूर्णरूपमा समर्पित जीवन साथी हुँदा पनि यौनसम्बन्धमा सन्तुष्टि कम हुन थाल्छ।
रोमान्टिक यौनसाथी वा लामो समयका लागि समर्पित जोडी र क्षणिक सम्बन्ध राख्न चाहनेहरूबीच हुने यौनसन्तुष्टिमा खासै ठूलो फरक नपर्ने तथ्य अध्ययनहरूले उजागर गरेका छन्। उनीहरूबीचको यौनसम्बन्धका विषयमा गरिएका अनुसन्धानहरूअनुसार औसतमा दुवै खालको सम्बन्धमा यौनसन्तुष्टि भएको पाइयो। रोमान्टिक सम्बन्धमा अझ बढी यौनसन्तुष्टि भएको पाइयो। केही समयका लागि राखिएको सम्बन्धमा यौनसन्तुष्टि भए पनि रोमाञ्चकता कम हुने पाइएको छ। यसले मानिसमा कम उत्साह दिने एवं त्यसको असर मानसिक र स्वास्थ्य स्थितिमा पर्न गएको पनि पाइयो। रोमान्टिक यौनसाथीहरूले एक अर्काबीच हुने यौनइच्छा, चाहनाका बारेमा खुलेर कुरा गर्नर्े र एकअर्काबीचको समानता र भिन्नताका विषयमा पनि कुरा गर्ने हुँदा यौनसन्तुष्टि केही बढी भएको पाइयो । जब व्यक्ति मायामा डुब्छ, धेरै कुरामा फरक आइहाल्छ। यसको प्रभाव यौन व्यवहारमा मात्र होइन, समग्र सामाजिक व्यवहारमा समेत पर्छ। मायामा डुब्नेहरूका बारेमा साहित्यकार एवं कविहरूले चर्चा गरेका छन। वैज्ञानिकहरूले पनि विभिन्न अनुसन्धानमार्फत प्रेम व्यवहारको चर्चा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार जब व्यक्ति गहिरो मायामा हुन्छ, उसले आफ्नो यौनसाथीलाई तुलना गर्दैन। राम्रो-नराम्रो पनि हेर्दैन। सही गलत छुट्याउने जिम्मा लिएको दिमागको फ्रन्टल करटेक्स बन्द हुन्छ। यसले गर्दा कतिपयले मायामा पर्दा सही के ? गलत के ? छुट्याउन नै गाह्रो भएको बताउँछन्, जब व्यक्ति मायामा पर्छ मस्तिष्कमा डोपामाइन भन्ने रसायन निस्कन्छ र यसलेे आनन्द महसुस गराउँछ। यो क्षणमा मानिसले के सही ? के गलत ? भन्नेसम्म पनि छुट्याउन सक्दैन। यस्तो समयमा राखिएको यौनसम्बन्ध सन्तुष्टिजनक हुन्छ। युवकहरूको तुलनामा युवतीहरूले क्षणिक रूपमा लिएको यौनसाथीसँग भन्दा रोमान्टिक यौनसाथीसँग बढी यौनसन्तुष्टि भएको अनुभव व्यक्त गरेका छन्।
धेरैजसो युवतीले कसैलाई छिटो विश्वास गरेर यौनसम्पर्क गरेकामा दुःख प्रकट गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि पनि माथि भनिएजस्तै गलत व्यक्तिसँग आफ्नो कुमारित्व गुमाएकोमा उनीहरूलाई बढी पश्चाताप हुने गरेको छ। केटाहरू अनौपचारिक यौनसम्बन्ध मन पराउँछन्, अल्पकालीन सम्बन्ध मन पराउँछन्। केटीहरू जीवन बिताउन केटाहरूसँग दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहन्छन्। केटाहरू यौनसम्पर्कपछि प्रेम गर्ने खालका हुन्छन् भने केटीहरू प्रेमपछि यौनसम्पर्क चाहन्छन्। केटीहरू यौनसम्पर्कमा छनौटपूर्ण हुन्छन्। किनभने बच्चा जन्माउनु, हुर्काउनु र उनीहरूसँग समय बिताउनु केटी मान्छेका लागि जैविक, भावनात्मक र प्रजननजन्य कुरा हुन्। तपाईंको प्रश्न पढ्दा तपाईंले सम्बन्ध राख्नुभएको यौनसाथीसँग तपाईंको प्रतिबद्धता छैन कि जस्तो देखिन्छ। तपाईंको उमेर र अनुभवका आधारमा अब तपाईं प्रतिबद्ध र समर्पित सम्बन्धमा जानु नै बेस हुन्छ। तपाईंले चाहना गरेअनुसार यौनसम्बन्धलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ। साभार : साप्ताहिक
« Reply #4 on: February 28, 2018, 11:08:33 PM »
५८ बर्षिया श्रीमतीको यौनइच्छा भने घटेको छैन।
म उमेरले ६० को हाराहारी पुगें। श्रीमती ५८ की छिन्। ५० वर्ष पुगेपछि बिस्तारै यौन क्षमता घट्दै गएको अनुभूति हुन थालेको थियो। शारीरिक रूपमा लगभग यौन क्षमता सकिएझैं भएको छ। यद्यपि मनले भने त्यो कुरा स्वीकार गर्दैन। मलाई पहिले झैं यौनक्षमता आओस् भन्ने लाग्छ। आफूले आफैंलाई अब उमेर ढल्किसक्यो, म किन यस्तो सोच्छु भनेर सम्झाउँछु। यो पीडा बढ्दै गएको छ, तर कसैलाई भन्न सकिनँ। श्रीमतीको यौनइच्छा भने घटेको छैन। उनको इच्छा पूरा गरिदिन नपाउँदा पीडा पनि हुन्छ। यो पीडा हटाउने केही उपाय छ कि ?
पुरुषहरूको उमेर ढल्कँदै जाने क्रममा यौनक्षमता पनि घट्दै जान्छ। विभिन्न अध्ययनबाट त्यसको पुष्टि भैसकेको छ। यसो भन्दैमा सबै पुरुषमा यो कुरा लागू हुन्छ भन्ने होइन। कतिपय पुरुषले उमेर ढल्कने क्रमसँगै आफ्नो यौन इच्छा कायमै राखेका हुन्छन्। यौनइच्छा नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन्। विशेषगरी उदासिनता एवं चिन्ता छ भने यौनचाहना घट्दै जान्छ। इन्डोक्राइन हार्माेनको गडबडी वा कुनै औषधि लगातार रूपमा लामो समयदेखि खाइरहेको छ भने पनि यौन चाहनामा कमी आउँछ।
केही अध्ययनले पुरुषहरूमा ५० वर्षको उमेरपछि ०.४ देखि ०.८ प्रतिशतले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट्दै गएका कारण यौन चाहनामा कमी आउने देखाएका छन्। अर्को अध्ययनका अनुसार जसले ६० नघिसकेपछि यौनचाहना बढी हुनु राम्रो होइन, असामान्य व्यवहार हो भन्ने विश्वास गर्नेहरूमा पनि यौनइच्छामा र्‍हास आउन सक्छ।
उमेर ढल्कँदै गएपछि पनि यौनजन्य आनन्द लिन सकिन्छ। युवा अवस्थामा र उमेर ढल्किएपछिको यौन चाहना, गतिविधि एवं मजबुतीमा भिन्नता आउँछ। २० वा ३० वर्षको उमेरमा र ६० वर्षको उमेरमा हुने यौनसम्पर्कमा केही भिन्नता हुन्छ। २० वा ३० वर्षको उमेरमा बालबच्चा वा करियर महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ, तर ६० वर्षको उमेरमा ती कुरा महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छन्। यतिबेला यौनसाथीबीच नजिकको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बन्न पुग्छ। प्रश्नमा उल्लेख भएअनुसार तपाईंकी श्रीमतीले तपाईलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ जुन तपाईंका लागि कुरा पक्ष हो। यस्तो सम्बन्धमा सकारात्मक सोचले काम गर्ने बानी बसाल्ने, मानसिक तथा शारीरिक अवस्था तन्दुरुस्त राख्ने, चिन्ता नलिने र बूढयौलीसँगै आफूलाई अनुकूल बनाउँदै लाने हो भने पाको उमेरसँगै यौन आनन्दमा कमी नहुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यी यस्ता कुरा हुन् जसले बुढयौलीको यौनजीवनलाई स्वस्थ र आनन्दित मात्र बनाउने होइन कि थप स्वस्थ र फुर्तिलो बन्दै जाने पनि हुन्छ। यो उमेरमा हुने यौनसम्पर्क वा जीवन पनि बोनस लाइफ जस्तै बन्दै गएको हुन्छ। जति बाँचिन्छ रमाइलोसँग दिनहरू बिताऔं भन्ने सोच विकास हुँदै गएको हुन्छ। चिन्ता नगर्दा मानसिक स्फूर्ति बढ्दै गएको हुन्छ भने मानसिक स्फूर्ति बढ्ने क्रमसँगै यौन आनन्दको उचाइ पनि बढ्दै जान्छ। अर्थात एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ र जीवन रोमाञ्चक बन्दै जान्छ।
यौनसम्पर्क र उमेरको केही सम्बन्ध त पक्कै छ, तर मानिसहरूले त्यसलाई कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यौन सम्पर्क र यौनजन्य गतिविधिबाट आनन्द लिने कुरा बुढयौलीमा पनि सम्भव छ। फरक यति हो कि मानिसहरूले बुढयौलीसँगै आफूलाई समायोजन गर्दै लगेका छन् कि छैनन? मैले पहिले पनि भन्ने गरेकी छु, सेक्स मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यससँग धेरै पक्ष जोडिएका छन्। टचिङ, किसिङ, सेन्सिङ, मायामोह, भावना साटासाट आदि कुरा पनि यौनजन्य क्रियाकलापका अभिन्न पक्ष हुन्। उमेर बढ्ने क्रमसँगै अनुभवबाट फाइदा लिन सकिन्छ। उमेर बढ्दै जाने कुरा सामान्य हो। यससँगै यौनजन्य क्रियाकलापको नियमित रुटिन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, उमेरलाई अगाडि जान दिइरहनुहोस् र यौनजीवनलाई आनन्ददायक बनाउनु, लाइट मुडमा रहनु, एक-अर्कालाई अझ बढी माया गर्नु, हिँडडुलबाट शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यस्थिति तन्दुरुस्त राख्नु, आधुनिक बन्दै जानु, नयाँ-नयाँ सोच-विचार ल्याउनु तथा छलफल गर्नु, यौनजन्य क्रियाकलाप गर्नु, रमाइलो कल्पना गर्नु, पर्याप्त समय लिएर डिनर वा मनोरञ्जक ठाउँमा जानु, धेरै लजालु नबन्नु र इमान्दार रहनु यौनजीवन फलदायी बनाउनु उपयुक्त उपाय हुन्। महिलाहरूको प्रजनन शक्ति त हुँदैन तर अन्यत्र यौनसम्पर्क गर्दा रोग लाग्ने सम्भावना भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। युवा यौनसम्पर्कभन्दा बुढ्यौली यौनसम्पर्क परिपक्व, सुरक्षित र सावधानीपूर्ण हुनु आवश्यक छ। अझ बढी ढुक्क हुन चिकित्सकसँग सम्पर्क गरी केही परीक्षण गराउनु आवश्यक हुन्छ तर यदि चिन्ता मात्र हो भने मनोविद्सँग परामर्श गर्न सकिन्छ।
« Reply #5 on: March 01, 2018, 05:27:51 AM »
तीनजना केटाहरुसंग गरें .. कसैसंग पनि रमाइलो भएन ! अब के गरौं ?
म २३ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ। मैले एक जना केटासाथीसँग यौनसम्पर्क गर्दै आएकी छु, तर हामी दुईबीचको सम्भोगमा मैले कहिल्यै सन्तुष्टि पाइनँ। हाम्रो सम्भोगको अवधि १०-१५ मिनेट हुन्छ। मेरा केटासाथीले चाहिँ पर्याप्त सन्तुष्टि पाएको कुरा बताउँछन्, तर म सन्तुष्ट हुन्न। हुन त मेरो केटासाथीको लिंग सानो छ। यही कुराको खुल्दुलीमा मैले ऊबाहेक अरू दुई जना केटासँग पनि सम्भोग गरेकी थिएँ। उनीहरूसँग पनि मैले यौनसुख प्राप्त गर्न सकिनँ। के कारणले यस्तो भएको हो ? मैले किन सम्भोगमा यौन सुख प्राप्त गर्न नसकेकी हुँ ? पछि गएर मवाट सन्तान हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला। मास्टर्स तथा जोनसनले मानव यौन प्रतिक्रिया चक्रलाई चारवटा चरणमा विभाजित गरेका छन्। ती हुन् : १ उत्तेजनाको चरण (एक्साइटमेन्ट फेज), २ प्लाटो फेज, ३. चरमसुख (अर्गाज्म फेज) र ४. रिजोलुसन फेज हो। प्लाटो फेजमा भएको यौन stimulation निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए एउटा त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जसमा पुगेपछि व्यक्ति यौन तनावबाट मुक्त हुन्छ। यसको अवधि निकै छोटो हुने भए पनि मानव यौनजीवनमा यो चरणको विशेष महत्त्व छ, किनभने यतिबेला नै मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुख वा आनन्दहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट सुखको अनुभव गर्छ। यसैलाई चरमसुख भनिन्छ। यसका लागि स्वर्गीय आनन्द, चरम आनन्द जस्ता कैयौं शब्द प्रयोग हुन्छन्।
चरमसुखको चरणमा मांसपेशीहरूमा तनाव बढ्छ र आफै खुम्चने तथा खुल्ने हुन्छ। श्वास-प्रश्वास तथा मुटुको गति बढेर दोब्बर हुन्छ र रक्तचाप पनि वृद्धि हुन्छ। महिलाहरूमा पाठेघर तथा योनिको बाहिरी भाग तथा शरीरको तल्लो भागका मांसपेशीहरू खुम्चने तथा फुक्ने हुन्छन्। पूर्ण चरमसुख पाउँदा यस्तो मांसपेशी खुम्चने फुक्ने क्रम १० देेखि १५ पटकसम्म हुन्छ। यतिबेला जुन सुखानुभुति हुन्छ हामी त्यसलाई चरमसुख वा चरम (स्वर्गीय) आनन्द भन्छौं। पुरुषहरूको हकमा चरमसुख प्राप्त गर्ने कुरा दुई चरणमा पूरा हुन्छ। सुरुमा आन्तरिक अङ्गहरूको खुम्चने फुक्ने क्रम चल्छ र वीर्यलाई मूत्रनलीमा धकेल्छ। यो अवस्थामा पुगेपछि स्खलन रोकिन नसक्ने भएकाले point of no return (प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न) पनि भनिन्छ। त्यसपछि मूत्रनली, लिङ्ग तथा पौरुष ग्रन्थिको खुम्चने फुक्ने क्रम शुरु हुन्छ र वीर्य पनि बाहिर निस्कन्छ। वीर्य लिङ्गबाट वाहिर निस्कनुलाई नै हामी वीर्य स्खलन भन्छौं। यही बेला नै पुरुषहरूले चरम सुख पनि पाउँछन्। आधारभूत रूपमा महिला तथा पुरुषमा यौन प्रतिक्रिया चक्र उस्तै हुन्छ तर पनि केही कुरामा भने फरक देख्न सकिन्छ। यदि चरमसुखको चरण पछि पनि यौन stimulation (स्टिमुलेसन) निरन्तर रूपमा भैरह्यो भने कतिपय महिलाले एकपल्टभन्दा बढी चरमसुख(multiple orgasm) प्राप्त गर्न सक्छन्। पुरुषहरूमा भने त्यस्तो हुँदैन। महिला तथा पुरुषबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फरक Refractory Period हो। पुरुषलाई चरमसुख पाएर पुरानै अवस्था फर्किएपछि केही समयका लागि यौन रूपमा उत्तेजित गर्न सकिंदैन, तर महिलाले यौन चरमसुख पछि पनि यौन क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।
महिलाले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न के गर्न सक्छन् ?
तपाईले प्रयोग गर्नु सम्भोग शब्द 'सम' तथा 'भोग' शब्दको योगबाट बनेको छ। त्यसको अर्थ दुवैले समान रूपमा भोग गर्ने हो। पुरुष तथा महिलाको यौन प्रतिक्रिया चक्रमा हुने भिन्नता तथा अन्य कारणले हरेक यौन सम्पर्कमा यो सम्भव हुन सजिलो छैन। कुनै पुरुषको त कुनै महिलाको यौनसुख प्राप्तिलाई ध्यानमा राखेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन सके महिलाले यौन सम्पर्कबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सहज हुन्छ।
यौन प्रतिक्रिया चक्रमा मात्र होइन, महिलाको यौनाङ्गको फरकपनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईंलाई थाहै होला, महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अङ्ग 'भगांकुर' बाहिरतिरै हुन्छ। सामान्यत: पुरुषमाथि र महिला तल रहेर गरिने यौन सम्पर्कले महिलाको भगांकुरलाई घर्षण गर्दैन। महिला माथि रहेर महिलाले आफूले चाहेजस्तो कटी प्रदेशलाई चलाउन सक्छिन्, जसले यौनसुख प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। तपाईंलाई थाहै होला, यसलाई हात वा औंलाले नै चलाएर यौन चरमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ। यौन प्रसाधन जस्तै- भाइब्रेटरको प्रयोग अर्को उपाय हो। तपाईंले हस्तमैथुन गरेर यौन आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन लेख्नुभएको भए पनि जवाफ दिन सजिलो हुने थियो।
त्यसबाहेक योनि, स्तन तथा अन्य संवेदनशील अङ्गको मर्दन, घर्षण अनि चलाउनेजस्ता क्रियालापमा संलग्न हुन सकिन्छ। त्यसबाहेक अन्य अनेक नयाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुरुषहरू जस्तै महिलाहरू पनि यौन उत्तेजक दृश्य, स्पर्श अनि परिकल्पनाबाट उजेजित हुन्छन्। यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पाक्क्रिडामा संलग्न भए यौन उत्तेजना प्राप्त गर्न र चरमसुखसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ। यसले यौन सम्पर्कमा संलग्न दुवै जनालाई एकसाथ यौन चरमसुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।
सानो लिंग र केटा साथी फेर्ने कुरा ?
भगांकुर बाहिरतिरै हुने र योनिको पनि बाहिरतिरको भाग नै यौन संवेदनशील हुने भएको हुनाले लिङ्ग केही छोटो नै भए पनि पर्याप्त हुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, केटा होस् वा केटी, यौन साथीले यौन सुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने मात्र हो। जसरी राम्रो दृश्य हेर्न वा मिठो सङ्गति सुन्न अरूले सहयोग गर्न सक्छन् तर त्यसको आनन्द आफैले प्राप्त गर्नुपर्छ यौनसम्पर्कको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। तपाईंको केटा साथीले त सहयोग गर्ने मात्र हो। तपाईंले आफैले यौन आनन्द प्राप्त गर्नुपर्छ।
तपाईंले पहिलो केटासाथीमाथि दोष थोपार्नु मनासिब छैन। त्यसमा पनि केटा फेर्दैमा यौन सुख प्राप्त होला भन्ने पक्का गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो बुद्धिमानीपूर्ण कदम हो जस्तो लाग्दैन। यस्ता सम्बन्धहरूले अन्य कतिपय समस्या जन्माउन सक्छन्। बरु आफूलाई केटासाथीले के गरिदिए अर्थात् भनौं स्पर्श गरिदिए वा के-कस्ता क्रियाकलाप गरिदिए सहयोग हुन्छ भनेर उसलाई त्यसमा संलग्न गराउनुभयो भने आनन्द प्राप्त गर्न सहयोग मिल्छ। यौनेच्छाका लागि केटा फेर्ने सोच राख्नु भएको हो भने त्यो त्यति बुद्धिमानी हुँदैन।
« Reply #6 on: March 05, 2018, 10:52:05 PM »
बढ्दो उमेरमा पनि यौनेच्छा कम भएन
कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो समस्या परिदिन्छ । म ५० नाघेको पुरुष हुँ । श्रीमतीले पनि ४५ वर्ष काटिसकिन् । यो उमेरमा यौनेच्छा कम हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर मेरो कम भएन, बरु बढेको बढ्यै छ, तर मेरी श्रीमतीको यौनेच्छा छैन भन्दा पनि हुन्छ । इच्छा हुँदा हस्तमैथुन गर्छु । यसो गर्दा आफूले गलत गरेँ भन्ने खालको भावना पनि आउँछ । हस्तमैथुन गर्दा शारीरिक रूपमा कमजोर भएको पनि महसुस गर्छु । बढ्दो उमेरमा यौनसम्पर्कले के–कस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छन् ?
यौनसम्पर्कले मानिसलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु अझ फुर्तिलो र तन्दुरुस्त राख्छ । मुख्य प्रश्न यौनसम्पर्क कत्तिको स्वस्थकर छ भन्ने नै हो ? यौनसम्पर्कबाट तपाईंले कत्तिको सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहनुभएको छ ? तपाईंको मनोदशा कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण विषय हो ।
तपाईंको कुरा सुन्दा तपाईंमा यौनमा रुचि छ भन्ने देखिन्छ । यौनमा तपाईंको रुचि हुनु र श्रीमतीमा रुचि नहुनु तपाईंको समस्या होइन । न त तपाईंको श्रीमतीको समस्या नै हो । कसैको शरीरले चाँडै यौनको बाटो त्याग्छ, कसैलाई अलि लामो समयसम्म यसले साथ दिन्छ । तपाईंले यौनमा अत्यधिक सन्तुष्टि लिइरहनुभएको बुझिन्छ । अन्यथा श्रीमतीको अभावमा पनि तपाईंले त्यसको मात्रा बढाउनुहुन्नथ्यो । स्वस्थ र नियमित यौनसम्पर्कले मानिसलाई अझ जाँगरिलो, जोसिलो र फुर्तिलो राख्छ । चाहे त्यो हस्थमैथुन नै किन नहोस् । हाम्रो धर्मशास्त्र, सामाजिक बन्धन एवं प्राचीन दर्शनले हामीलाई यौनबाट टाढा बस्ने निर्देशन दिएका कारण तपाईंको मनमा अपराध भाव उत्पन्न भएको हुनसक्छ । वास्तवमा कुन कुरा ठीक हो र कुन कुरा गलत हो भन्ने कुरा बाहिर लेखिएका वा भनिएका कुरा आफ्नो स्थानमा ठीक हुन सक्छन् तर ती कुरा तपाईंको शरीर र मनसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नियमित यौनसम्पर्कले मानिसको भावनालाई पनि सशक्त बनाउँछ र मानसिक तनाव घटाउँछ । सन्तोषजनक रवं स्वस्थकर यौन सम्पर्कबाट कुनै पनि जोडीले भोलिपल्ट तनाव घटेको महसुस गरेको पाइएको छ । त्यस्तै हस्तमैथुनबाट चरम आनन्द लिने मानिसहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले त यी दुवै आनन्द लिने विधि प्रयोग गर्नेहरूको मृत्युको दर ५० प्रतिशतले कम रहेको औंल्याएका छन ।
यौनक्रियामा दुईजनाको सक्रिय सहभागिता हुनु राम्रो हो, तर दुबै जना सक्रिय नभएको अवस्थामा हस्तमैथुन राम्रो विकल्प हो । तपाईंले यसमा अपराधबोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उमेरका कारण केही वर्षपछि तपाईंको यौनेच्छा आफैं कम हुँदै जान्छ । त्यतिबेला मैले अनावश्यक तनाव लिएको रहेछु भन्ने तपाईंले आफैं महसुस गर्नुहुनेछ । विभिन्न अध्ययनले पनि बुढेसकालमा बेला–बेलामा यौनेच्छा सक्रिय हुने देखिएको छ । यस्तो सक्रियता केही वर्ष रहन्छ र आफैं बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । त्यसैले यसमा चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
साभार : ईकान्तिपुर
« Reply #7 on: March 05, 2018, 10:54:30 PM »
श्रीमतीबाट कुमारीत्वको अनुभव गर्न सकिनँ
मलाई कुमारीत्व महत्वपूर्ण लाग्छ, तर आफ्नी श्रीमतीबाट यसको अनुभव प्राप्त गर्न सकिनँ जसले गर्दा मेरो मन साह्रै अशान्त छ । उनीप्रति कुनै बेला रिस, घृणा जाग्छ भने कुनै बेला माया लागेर आउँछ । मैले उनलाई यही कुराले धेरै तनाव दिएको छु र आफू पनि तनावमा हुन्छु । म कसरी सामान्य हुन सकुँला ? के कुमारी युवतीको खोजी गरिहिँड्नु उचित हो ?
*कुमारीत्वको कुरा *
विशेष गरेर युवतीहरूको कौमार्य विकसित मानव सम्यताको मात्र नभै पहिलेदेखि नै मानव यौनिकताको एक महत्वपूर्ण पक्ष रहेको पाइन्छ । यसमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने एक किसिमको द्वन्द्व जहिले पनि समाजमा छ । विवाहमा कुमार केटालाई कन्या खोज्ने चलन भए पनि विशेष गरेर कुमारी केटीको सन्दर्भमा कौमार्य भंग भए–नभएको कुराले निकै महत्व राखेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिका कन्या कुमारीलाई अक्षत योनि अर्थात् Virgin भनिन्छ । कुनै व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राख्नु नै कौमार्य भंग हुनु हो । जैविक रूपमा यौनसम्पर्कको अनुभवहीनता नै कौमार्य भंग नहुनु अर्थात् कुमार वा कुमारी हुनु हो ।
*किन यति धेरै चासो ?*
सतही रूपमा अहिले समाजमा व्याप्त मूल्य–मान्यतालाई मान्नैपर्ने वा नपर्ने सन्दर्भमा पनि अनेक कुरा छन्, तर जैविक रूपमा केही गहिरा कुरा पनि छन् जसलाई छोटकरीमा चर्चा गरौं । गर्भनिरोधको कुनै उपाय नभएको र सन्तान कसको हो भनेर थाहा पाउने प्रविधि नभएका बेला पुरुष पूर्ण रूपमा यी कुराको जानकारीका लागि महिलामै भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो । पहिलेको जमानामा महिलाको तुलनात्मक रूपमा छोटो प्रजनन् समय भएको स्थितिमा कौमार्य भंग भएका केटीसँग सम्बन्ध गाँस्नुको अर्थ कुनै अर्को पुरुषको बच्चालाई आफ्नो भनेर आफूले हुर्काउने दायित्व लिनुपर्ने परिस्थिति हो । यो धेरै अर्थले अस्वीकार्य स्थिति हो । दोस्रो महत्वपूर्ण कारण, यदि एकपटक अन्य कुनै व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राखिसकेको व्यक्तिले फेरि पछि पनि अर्को कुनै व्यक्तिसँग लुकिछिपी यौनसम्पर्क राख्ने सम्भावना बढी हुने मानिने भएकाले पुरुषले सामान्य रूपमा यी कुरा स्वीकार गर्दैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कारण अर्को कुनै पुरुषसँगको यौनसम्पर्कबाट कौमार्य भंग भएका महिलाले अर्को पुरुषसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गर्न नसक्ने विश्वास गरिन्छ । धेरै पुराना यी जैविक आधारले अहिले पनि आधुनिक समाजमा एक हदसम्म पकड बनाएका छन् जुन परिवर्तन गर्न सजिलो नहुन सक्छ ।
*समस्या के ? *
तपार्इंले कौमार्य सुख प्राप्त गर्न नसक्नु भएको कुरा बुझिएन । तपाईंले किन कौमार्य भंग गर्ने अनुभव प्राप्त गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएन ।
तपार्इंलाई पक्कै पनि थाहा होला, अहिले योनिच्छद भए–नभएको आधारमा कुनै महिलाको कुमारीत्व वा कौमार्यको निर्धारण गर्न सकिने स्थिति छैन । कतिपय युवतीको योनिच्छद जन्मजात नै नहुन सक्छ वा यसको राम्रोसँग विकास नभएको हुनसक्छ । प्रथम यौन सम्पर्क हुनुभन्दा पहिले नै कतिपय केटीमा शारीरिक क्रियाकलापका दौरान योनिच्छद च्यातिन सक्छ । त्यसैगरी महिनावारीको रगत सोस्न प्याडको सट्टा प्रयोग गरिने Tampon (टयाम्पोन) पनि योनिच्छद च्यातिने कारण हुन सक्छ । अहिले विवाहको उमेर पछिल्तिर धकेलिएको छ, त्यसैले कैयौं किशोरी वा युवतीहरूले हस्तमैथुनको माध्यमबाट आफ्नो यौनेच्छा पूरा गरेका हुन्छन् र कतिपयले औंलाका साथै अन्य वस्तुको प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । त्यसैले कतिपय युवतीले हस्तमैथुन गर्ने क्रममा आफ्नो योनिच्छद च्यात्न सक्छन् । कुनै केटी पूर्ण रूपमा कुमारी भए पनि अर्थात् यौनसम्पर्क नै नगरेको भए पनि पहिलो यौनसम्पर्कका बेला पटक्कै रगत नआउन वा कुनै पीडानहुन सक्छ ।
केही युवतीको योनिच्छद निकै लचिलो हुनसक्छ, जुन यौनसम्पर्क राखिसकेर पनि नच्यातिन सक्छ भने केही मुलुकमा अचेल योनिच्छेद च्यातिसकिएको भए पनि शल्यक्रिया गरेर पुन: बनाइने (हाइमेनोराफी) गरेको पनि पाइन्छ, जसले योनिच्छदलाई कुमारीत्वको आधार मान्ने कुरालाई थप जटिल र अमान्य बनाइदिएको छ ।
*के म सामान्य बन्न सक्छु ?*
तपाईं सामान्य हुन नसक्ने कुरै छैन । तपाईंको श्रीमतीसँगको पहिलो यौनसम्पर्क तपाईंले अपेक्षा गरेजस्तो भएन भन्दैमा उहाँको कौमार्य पहिले नै भंग भएको र अन्य पुरुषसँग सम्बन्ध थियो भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसैले तपाईंले श्रीमतीलाई अनावश्यक रूपमा तनाव दिनु वा आफूले तनाव लिनुको कुनै अर्थ छैन । सामान्य बन्न यसरी अनावश्यक रूपमा रुमल्लिनुको सट्टा भावी दिनमा सबै शक्तिलाई केन्द्रित गरेर भविष्य सुखद बनाउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ । त्यसो गर्नुभयो भने सामान्य बन्न नसक्ने कुनै आधार रहँदैन । अक्षत योनि कन्या खोज्नुपर्ने कुनै ठोस कारण पनि देखिँदैन । सुखद यौन जीवनको शुभ कामना ।
« Reply #8 on: March 06, 2018, 04:08:54 AM »
उहाँमा यौनइच्छा जागृत गराउन के गर्नुपर्ला ?
म ४२ वर्षकी भएँ र हाम्री १२ वर्षकी एउटी छोरी पनि छिन् । मेरो सानैदेखि चिनेको साथीसँग मागी विवाह भएको थियो । विवाहको सुरु–सुरुमा यौनसम्बन्ध कायम गर्दा लाज लाग्थ्यो । विवाह भएको दुई वर्षपछि छोरी जन्मिन् तर त्यसपश्चात् उहाँलाई यौनइच्छा हुन छाड्यो । बिस्तारै ठीक होला कि भन्ने आशामा १० वर्ष बितिसक्यो । हामीबीच पूरै यौनसम्बन्ध बन्द भएको पनि लगभग ३ वर्ष भैसकेको छ । कहिलेकाहीं रिसले छोडपत्र गरौं भन्ने लाग्छ, तर छोरीका कारणले रोकिन्छु । यो समस्याको समाधान के
होला ? हामीबीच शारीरिकसम्बन्ध भएन भने नाता सम्बन्धलाई मात्र अघि बढाउनु कति उचित हुन्छ ? उहाँमा यौनइच्छा जागृत गराउन के गर्नुपर्ला ? बी.
यौनचाहनासम्बन्धी यस्ता प्रश्न धेरैले राख्ने गरेका छन् । चिकित्सकीय भाषामा कुनै पनि दम्पत्तीबीच एक वर्षमा दस पटक वा त्यसभन्दा कम यौनसम्बन्ध कायम हुन्छ भने त्यसलाई सेक्सलेस म्यारिज भनिन्छ । धेरैजसो व्यक्तिले महिलाहरूमा भन्दा पुरुषमा यौनइच्छा बढी हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन् तर महिलामा पनि यौन चाहना हुनु स्वभाविक हो । यससम्बन्धमा हालै अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धान अनुसार सात जोडीमध्ये एक जोडी सेक्सलेस म्यारिजबाट गुज्रिरहेका छन् । सामाजिक भनाइअनुसार प्राय: गरी महिलाहरूनै यौनसम्बन्धबाट टाढिन्छन् तर वास्तवमा पुरुषहरूमा पनि यौनसम्बन्धमा कायम गर्न नचाहनेहरू उत्तिकै छन् ।
तपाईंको यो समस्याको स्रोत धेरै हुन सक्छ । तपाईको प्रश्न पढ्दा तपाईंको श्रीमान अहिले चिन्तामा हुनुहुन्छ कि भन्ने बुझिन्छ । दोस्रो, तपाईं र तपार्इंको श्रीमान्बीच अन्य कुनै कुरामा मतभेद वा झगडा छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सामाजिक कुरालाई लिएर हरेक दिन गुनासो गर्ने र अरूको श्रीमान्सँग आफ्नो श्रीमान्मा नभएको कुरा दाँज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि एक–अर्काप्रति सम्मान र स्वभावमा समस्या थपिन थाल्छ । त्यसले एक–अर्काप्रतिको आकर्षणमा समस्या पर्न थालेको हुन सक्छ भने परस्त्रीगमन पनि हुनसक्छ अथवा भनौं मानसिक तनावका स्रोत धेरै हुन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा समस्या पत्ता लगाउने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिस विभिन्न बाध्यता, आशा, प्रभाव, भ्रमपूर्ण प्रेम, खानदान कथित सामाजिक प्रतिष्ठा आदिमा ध्यान दिन्छन् र तत्काल विवाह गरिहाल्छन् । एक–अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास नगरी गरिएका यस्ता विवाहहरू पछिसम्म पनि पारिवारिक असन्तुष्टि र कलहका स्रोत बन्न सक्छन् । तपाईंको समस्याको वास्तविकतामा पुग्नुअघि यस्ता धेरै कुरा केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंको श्रीमान्मा यौन निष्क्रियतासम्बन्धी कुनै समस्या पनि उत्पन्न भएको हुनसक्छ । त्यसका लागि चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा यौन क्रियाकलाप कति पटक भयो भन्नुभन्दा कति गुणस्तरीय भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंहरूले एक–अर्कालाई दोष लगाउँदा विभिन्न समस्या सिर्जना हुन सक्छ र तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ जटिल बन्दै जान्छ । आफ्ना श्रीमान वा श्रीमती जसको यौन इच्छा कम छ उसलाई दबाब दिनुभन्दा एक–अर्काप्रतिको बुझाइलाई बढावा दिनु आवश्यक हुन्छ । दुई जनाबीच यौनचाहनालाई लिएर भावना साटासाट वा भावना सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफू आकर्षक बन्ने, परिवेश यौनमय बनाउने, रमाइलो गर्ने, यौनअंगहरूलाई उत्तेजित मुडमा सुमसुम्याउने, गुणस्तरीय लुब्रिकेन्टस प्रयोग गर्ने, एक–अर्काको शरीर एवं भावना बुझ्ने प्रयास गर्ने कामहरू गर्नुहोस् ।
दम्पती जसको जीवनमा यौनसम्बन्ध नै छैन उनीहरू श्रीमान् वा श्रीमतीका रूपमा किन एक–अर्कासँग लामो समय बसिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि धेरै अनुसन्धान भएका छन् । सामाजिक वा पारिवारिक दबाब वा भनूँ दम्पतीबीचको निर्भरताले पनि छोड्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले अहिले नै सम्बन्ध टुङ्याउने कुरा सोच्नुभन्दा उहाँले तपाईंप्रति कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ, पत्ता लगाउनुहोस् । त्यसका लागि उहाँले दैनिक तपाईंलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्त गर्ने कुरा के हो, याद राख्नुहोस् र उहाँको भावना, चाहना आदिको समस्या सुल्झाउन एक–अर्कासँग संवाद गर्नुहोस् । समस्या गम्भीर छ भन्ने लाग्छ भने दुवैले विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।